Laanta Xisbiga Kulmiye ee Minnesota oo Dooratay Guddi Cusub | Somaliland.Org
Laanta Xisbiga Kulmiye ee Minnesota oo Dooratay Guddi Cusub
August 28, 2008	Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo gobolka Minnesota, USA ayaa maalintii Axadda ee bisha August ahyd 24-ka shirkoodii sanad laha ahaa ku qabsaday magaalda Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagu doorto guddi cusub oo bedesha gudidii hore oo muddo sanad ah xilkan soo haysay ayaa waxaa kasoo qab galay dadwayne aad u fara badan oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee minnesota.
Furitaankii shirkaas waxa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyey Ismaaciil Maxamed Jaamac(Xayraan) oo ah guddoomiyaha xilku ka dhaamaday. Guddoomiyuhu wuxu ugu horayn ka waramay hawlaha wax ku oolka ah ee u qabsoomay muddadii ay xilka hayeen. “Marka laga tago tirada iyo iyo tayada taageerayaasha xisbiga Kulmiye ku leeyihiin State-kan Minnesota oo runtii kor ku kacday muddadii aanu xilka haynay, waxa kale oo xidhiidh wayni inaga dhexeeyaa dhamaan laamaha xisbiga Kulmiye ee USA, waxanu kale oo aynu ku xidhanahy dhamaan laamaha xisbigu ku leeyahay dunida dacaladeeda iyo weliba xarunta guud ee xisbiga, Sidaa waxa yidhi Guddoomiye Ismaaciil Xayraan”.
Guddoomiyuhu mar uu ka hadlayey hadafka loo abuuray Laantan waxa uu yidhi:
Sidaynu la socono wadankeenu wuxu qaatay nidaamka xisbiyada badan kaas oo u oglonaaya xisbiyada qaranka in dakhliga dalka soo gala laga kaabo si’aanay u burburin, balse dawladda maanta jirtaa iska daa dhaqaale ay siiso xisbiyada mucaaridka ahe waxay hanti badan ku bixisaa sidii ay u baabi lahaayeen iyaduna u noqon lahayd awooda keliya ee dalka ka jirta. Sidaa darteed ayuu yidhi guddoomiyaha dhaqaalaha keliya ee uu xisbiga Kulmiye ku fadhiyaa waa dhaqaalaha ay ka helaan taageerayaasha xisbiga ee qurbaha ku nool. Markaa waxan mudanayaal idil kula dardaarmayaa in la labanlaabo dadaalka aynu maal iyo maskaxba ku tarayno xisbiga.
Guddoomiyuhu mar uu ka hadlayey midnimada Jaaliyadda Somaaliland ee Minnesota wuxu yidhi. Ummadda Somaliland ee halkan ku nooli waa dad isku dal ah isku diin, isku dan ah oo isku dhaqan ah, inagoo siyaasadda ku kala duwanaan karna haddana isku qaddiyad ayeynu nahay taas ah in jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland yahay muqadas. Dano badan oo kale ayaa inaga dhexeeya maadaama meel qurbe ah oo aynu cadaw badan ku leenahay aynu ku noolahay, sidaa darteed waxan mudanayaal idin kula dardaar mayaa inaad mar walba ilaalisaan isku xidhnaanta iyo wax wada qabsiga jaaliyadda Somaliland ee Minnesota.
Ugu dambayntii waxa guddoomiyuhu kula dardaarmay gudiga cusub ee xilka la wareegaysa in ilaahay u fududeeyo xilka ay qaadeen anagoo mar walba la garab taagan wixii talo iyo tusaale ah ee ay nooga baahdaan.
Intaas ka dib waxa hadalka la wareegay guddiga qabanqabada shir waynaha waxayna halkaa kelmado mahad naqa uga soo jeediyeen gudigii xilku ka dhamaaday, iyagoo ku amaanay sidii geesi nimada lahayd ee ay xilkooda u guteen.
Mahadnaqaas ka dib waxa la guda galay doorashadii guddiga cusub, waxana madashaa lagu dooratay guddi ka kooban todoba xubnood oo magacyadoodu kala yihiin:
1- Jaamac Hiirad Yuusuf Guddoomiye
2- Abubakar jibriil Guddoomiye-kuxigeen
3- Cawaale Cabdi Raage Lacag-haye
4- Cabdillahi Xaaji Bullaale Cali Xoghaye
5- Saalim Saxardiid Xubin
6- Cabdi Saleebaan Xubin
7- Taha Yuusuf Xubin
Xafladda xil wareejinta ayaa dhici doonta 31-ka bishan August oo ku beegan maalinta Axadda ah ee fooda inagu soo haysa